गुरुङको ‘असल संस्कारः समृद्धिको आधार’ विमोचित - newslinesnepal
प्रकाशित मिति : २९ मंसिर २०७५, शनिबार १८:२६
कार्यक्रममा प्रा. उषा ठाकुरले साहित्य र संस्कार संस्कृृतिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहने बताईन् । उनले भनिन्,‘समाज सुधारको लागि साहित्यकारहरुको ठूलो भूमिका हुन्छ, देशको विकास र समृद्धि भाषण गरेर आउँदैन, बोलेका कुराहरु व्यबहारमा उतार्नुपर्छ, राजनीति, सामाजिक मुल्य मान्यताहरु संस्कारयुक्त हुनुपर्छ, यसको लागि पशुपतिजीको कृति एकदमै पठनीय छ, राम्रो छ, त्यही पंक्तिमा पशुपति गुरुङ उभिनुभएको छ, यसलाई निरन्तरता दिनुहोला, मेरो शुभकामना छ ।’
कृतिकार गुरुङलाई कक्षा १० सम्म पढाएका शिक्षक तोयानाथ पौडेलले आफूले शिक्षा दिएको विद्यार्थीले पुस्तक लेखेर आफैलाई विमोचन कार्यक्रममा बोलाउँदाको खुशी शब्दमा व्यक्त गर्न नसकिने बताए ।
कृतिका कृतिकार पशुपति गुरुङले पुस्तकमा आफूले जीवन–भोगाइ र समाजका दृश्यहरु समावेश गरेको सुनाईन् । उनले भनिन्,‘हाम्रो देश किन बनेन ? हाम्रा यूवाहरु विदेश जानुपर्ने बाध्यता र संस्कार कहिले हट्छ ? हाम्रो देश कहिले बन्ला ? यस्ता धेरै प्रश्नहरुले मलाई विदेशमा घोचिरहेका हुन्थे, म विदेशमा कति रोएँ ? कति दुःख पाएँ त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन्, हाम्रो नेपाल संस्कारविहिन बन्दै गएको अवस्था छ, यसमा सम्पूर्ण नेपालीहरु गम्भिर बन्नुपर्छ ।’